Intel Yakafunga Kurega Intel Graphics Kugadziridza Turu YeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Graphics Dzosera Chishandiso cheLinux chichagumiswa, izvi zvinodaro nekuti kubudikidza neshoko repamutemo vakomana veIntel vazivisa kune vatengi vavo kuti vakaita sarudzo kurega kutsigira chishandiso cheLinux.
Nharo yake kupedzisa kutenderera kwekuvandudza ndeyekuti chishandiso ichi chatove chisingachashandi, sezvo yakasikwa muna2013 kuitira kupa vatengi vayo vanoshandisa iyo Linux system chishandiso chinoita kuti zvive nyore kwavari kugadzirisa zviri pamutemo shanduro dzevatyairi vavo, mafemu, madhiraivha uye zvimwe zvinoshandiswa.
Intel Graphics Kugadziridza Turu yakanga yatove yakasarudzika paLinux sezvo mutyairi wemifananidzo aive atoverengerwa, nenzira iyi pakanga pasisina chikonzero chekuita chero kumisikidzwa.
Kunge vanozvigovana muchirevo:
Kubatsira kukuru kwakapihwa neIntel® Graphics Gadziriso Yekushandisa yeLinux * OS yaive yekurerutsa maitiro ekuvandudza kune yazvino firmware, mutyairi uye zvimwe zvinhu muchiedza cheimwe nguva ingangoita nguva yakasara kubva pakuwanikwa kusvika mukubatanidza kernel.
Chishandiso yaive yakagadzirirwa kupa yazvino vhezheni yeIntel Graphics Stack isati yaburitswa zviri pamutemo neLinux vatengesi.
Vatsva veIntel Hardware varidzi vaiwanzoda kushandisa chishandiso kuti vawane zvakanakisa kubva kuGPU yavo pavanoshandisa Linux.
Ubuntu naFedora vaive marisheni akatsigirwa zviri pamutemo echishandiso, asi vashandisi vezvikamu zvinoenderana, kusanganisira Linux Mint, vaiwanzoishandisa zvakare.
Maitiro ari nani arikugadzira kupinza nekukurumidza uye vashandisi vanozoona kuti Fedora 27 uye Ubuntu 17.10 nekupfuura zviripo chaizvo. Naizvozvo, tiri kurega chishandiso chekuvandudza senge vhezheni 2.0.6.
Kugoverwa kweLinux kwagara kunosanganisira Intel® giraidhi mutyairi nekukasira, pasina kudiwa kwekuwedzera kumisikidza. Isu tichachengeta foramu yekutsigira iripo kwechinguva, kunyangwe isu tichivimba ndeyekuchengetedza zvinyorwa.
Kunyangwe Intel iri imwe yemakambani anopa zvakanyanya mukusimudzira kweLinux Kernel, iyo yavanopa nenhamba yakawanda yemitsetse kukodhi yayo, ini pachangu ndinogona kutaura kuti kana ivo vafunga kumisa rutsigiro rweichi chishandiso imhaka yekuti ndiani anotenda zvakasimba kuti basa ravo mune izvi uye kuti mukati memitsara iyi ine mukana wekuti zvigadzirwa zvavo zvive neakanakisa kuita muLinux.
Inzwa wakasununguka kugovera zvaunofunga nesu muchikamu chemashoko.
mabviro: Intel yekuvandudza-chishandiso
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Intel yasarudza kurega iyo Intel Graphics Kugadziridza Turu yeLinux
wafunga here ????
Pindura kuna hehehehe
Izvo zvaive zvakakodzera iyo dick ... ini ndinoshandisa nvidia ...
Spanish mudzidzisi akadaro
Uyu mukomana haagoni kunyora ……
Pindura mudzidzisi wechiSpanish
Dick ndizvo zvaunazvo zvehuropi xd
Maitiro ekuisa Atom (uye kuiisa muchiSpanish) muDebian